Ikhabhinethi yelog yephupha enemibono yepanoramic
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguMoice Ursula
Ikhaya leeholide elikhethekileyo, elizolileyo, elinobubele kusapho ngaphezulu kwamafu elinombono omangalisayo weKarawanken, ilungele ukuhamba ezintabeni okanye ngokuthe ngqo kwi-ski slope!
Amagumbi okulala ama-4, amagumbi okuhlambela ayi-2, indawo yokutyela ebanzi yabantu abasi-8
Indlu yeplanga entle yakhiwe ngeziqu zemithi epheleleyo. Oku kunika zombini ngaphandle kunye nangaphakathi umtsalane owodwa. Izixhobo kunye nefenitshala zikhethwa ngabom ukuba zezanamhlanje kwaye zisebenziseke.
Induli yepropathi enkulu, ethambekileyo, ejonge emazantsi ivumela imbonakalo yepanoramic engafihlwanga ngokupheleleyo ye-180 ° ngaphezulu kweendawo ezinkulu ukuya kuthi ga eKaravanken. Indlu igcwele ukukhanya kwelanga, i-terrace ikumema ukuba uhlale kwaye ujabulele imini yonke.
Igadi yendalo, enkulu enemithi emidala ilungele ukuba abantwana badlale. Kukho ujingi kunye nezinye izixhobo zokudlala zamaplanga. Indawo enkulu, egqunywe kabini eneendawo zokupaka ezi-2 kunye nebhayisekile / ishedi yesixhobo iyafumaneka.
Le ndlu ikwi-1650 yeemitha ngaphezulu komphakamo wolwandle kwilali yaseHochrindl-Kegel, eyinxalenye yendawo yokutyibiliza kunye nokuzonwabisa eSirnitz / Hochrindl kwindawo yolondolozo lwendalo kunye nendawo yokuhamba intaba yeCarinthian Nockberge.
Kuthe cwaka kakhulu ekupheleni kwe-cul-de-sac ngasekunene kwehlathi. Umtsalane othile ebusika kukufikelela ngokuthe ngqo kwi-ski slope, ekuvumela ukuba uqhube phantsi kwaye uphume endlwini.
IHochrindl yindawo edumileyo yokutyibiliza ekhephini enezinyusi ezisi-8, amathambeka amaninzi anokubakho, iindlela zokutyibiliza kwilizwekazi elinqumlayo, ukhenketho lokuhamba ngekhephu, ukubaleka kwe-toboggan kunye nokukhwela ihashe lokuthandana.
Isikolo seSki, iindawo zokutyela kunye nemarike encinci zikumgama wokuhamba. Iindawo ezinkulu zokutyibiliza ekhephini eBad Kleinkirchheim naseTurracher Höhe zombini zikumgama oziikhilomitha ezingama-20 ngemoto.
Kumgangatho wokuqala wendlu, umnyango wokungena ukhokelela kwipaseji ebanzi / kwizinyuko ezinendawo yokugcina. Ukusuka apho iya kwindawo enkulu yokuhlala, yokutyela kunye nekhitshi efikelela kububanzi bendlu yonke. Embindini kukho isitofu sethayile esiqhelekileyo esiluhlaza, esinokufakwa ngokhuni olusuka kwipaseji. Inenkqubo yolawulo oluzenzekelayo ye-state-of-art, ngoncedo apho yonke indlu inokufudumeza ngokufanelekileyo. Ikhitshi ixhotyiswe ngoku ifriji / isikhenkcezisi, isitovu seceramic, i-oveni kunye nomatshini wokuhlamba izitya.
Kukwakho negumbi lokuhlambela elinendlu yangasese kumgangatho ophantsi, kunye negumbi lokulala elineebhedi ezi-2.
Izinyuko zamaplanga ezenziwe ngamaplanga zikhokelela kumgangatho ophezulu onamagumbi okulala ama-3 abanzi, amabini anebalcony yokufikelela kwicala elingasezantsi lepanoramic kunye negumbi lokuhlambela elikhulu elinebhafu, isinki ephindwe kabini, indlu yangasese.
Ukufudumeza: ukufudumeza umgangatho ophantsi kumagumbi anethayile;
Ngokuzenzekelayo, indlu ifudunyezwa sisitovu esisisiseko / esifakwe ithayile.
Umbuki zindwendwe ngu- Moice Ursula